ကို Canon သည်ဆိုးဆေး
ကို Canon သည် ink
Epson သည် ink
HP ကသည် ink
Lexmark သည် ink
Samsung ကသည် ink
Konica Minolta မိတ္တူးကူးစက်ဘို့အ
ပရင်တာ Consumer ဖြေရှင်းချက်
ကို Creative စာရေးကိရိယာဖြေရှင်းချက်
TS-7700 စီးပွားရေး Portfolio
Padfolio 1. စီးပွားရေး & ပြန်လည်စတင်မည်
2. အကြီးစား & စနစ်တကျသိုလှောင်
3. ဆန်းသစ် & ပြည်ထဲရေး Pockets
4. စတိုင် & Functional လက်ဆောင်ပေးမယ်
5. Hidden လက်ကိုင် & Fine လက်ရာလက်
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Download As PDF
အရောင် Black က / ဘရောင်း
spec ။ 13 * 10 ich (A4 အရွယ်အစား)
အထုပ်အရွယ်အစား 33.5 * 26 * 3.5 စင်တီမီတာ (13 * 10 * 1.3 လက်မ)
[ စီးပွားရေး & Padfolio ပြန်လည်စတင်မည် ] Professional ကသားရေအစုစုကိုသင်တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တူသေချာစေရန်စတိုင်အနက်ရောင်မှ PU သားရေများနှင့်ချောမွေ့ပြောင်လက်သတ္တုဇစ်နဲ့ခိုင်မာတဲ့ပထမဆုံးစှဲဖန်တီး;
[ အကြီးစား & စနစ်တကျသိုလှောင် ] ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူအရွယ်အစား 335 × 260 × 35 မီလီမီတာ / 13 × 10 × 1.4 လက်မ, သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများစည်းရုံးရေးများအတွက်စံပြ, အဆိုပြုချက်, ပြန်လည်စတင်, ခရီးသွားလက်မှတ်တွေ, စီးပွားရေးကတ်များနှင့်အရာအားလုံးထက်အများစုအိတ်ကိုယ်စီကိုင်ထားနှင့်အိတ်ကိုက်ညီ စီးပွားရေးလောကမှာကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်;
[ ဆန်းသစ် & ပြည်ထဲရေး compartment ] တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦး Refill အရေးအသား notepad, တစ်ဦးချင်းစီကလောင်ကိုင်ဆောင်သူ, အိုင်ပက်သို့မဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်း,6စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ကိုင်ဆောင်သူနှင့်ပိုပြီးများအတွက်အထူးလုပ်အိတ်ကပ်ကမ်းလှမ်း;
[ စတိုင် & Functional လက်ဆောင်ပေးမယ် ] အမှုဆောင်အရာရှိ, ပညာရှင်များ, ကျောင်းသားများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်အလုပ်များဘို့ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဘွဲ့ရတစ်ကြီးမြတ်သောဆုကြေးဇူး, ယောက်ျားမိန်းမတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အကောင်းဆုံး, ပါးလွှာချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်စတိုင်ဆုကြေးဇူးကို;
[ Hidden ကိုင်တွယ် & Fine လက်ရာလက် ] အာကာသသိမ်းပိုက်သယ်ဆောင်နှင့်မအဆင်ပြေဝဲချုပ်နှင့်ဝှက်ထားသောသံလိုက်လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကောင်းပြီ-ထွင်းထုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသားရေအစုစုကို, သငျသညျ, သင်၏လက်၌ကိုင်သင့်ရဲ့လက်မောင်းအောက်မှာသယ်ဆောင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်သုံးနိုင်သည်ဖြစ်စေ လက်ကိုင်အိတ်။
ယခင်: မြင်းကောင်ရေ 902xl မှင်သည့်အရာတစ်ခု
နောက်တစ်ခု: TS-220 စီးပွားရေးလက်ကိုင်အိတ်
အလုပ် Bag, စီးပွားရေး Portfolio